भारतीय राजदुतले अचानक किन भेटे गृहमन्त्रीलाई ? | My News Nepal
भारतीय राजदुतले अचानक किन भेटे गृहमन्त्रीलाई ?
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले बिहिबार अचानक भेटवार्ता गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा भएको भेटवार्ता दुई देशबीचको सम्बन्ध, आपसी सहकार्य र सहयोगको विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।
उनले भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेमा बन्न लागेको नेपाल प्रहरीको तालीम केन्द्र छिटो निर्माण हुने वातावरण बनाउन भारतीय राजदूतलाई आग्रह गरे ।
यस्तै, खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै हुने मानव तस्करी, सुन तस्करी, लागुपदार्थको ओसारपसारलगायतका अपराधविरुद्ध भारत सरकारको सहयोगका लागि आग्रह गर्दै गृहमन्त्री थापाले यस्ता अपराधविरुद्ध दुई देशको संयुक्त सहकार्य आवश्यक रहेकामा जोड दिए । जवाफमा राजदूत पुरीले यस्तो सहयोग गर्न भारत तयार रहेको बताए ।
राजदूत पुरीले नेपाल प्रहरीको तालीम केन्द्र निर्माणकार्यको विषयलाई आफूले प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको भन्दै योसम्बन्धी कार्य अघि बढिसकेको जानकारी दिए । भेटमा उनले गृहमन्त्री थापालाई भारत भ्रमणका लागि आग्रहसमेत गरे ।